नेपाल पाना प्रकाशित: २०७५-६-६ गते | 128072 पटक हेरिएको
काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको घटनाको दुई महिना वित्दासम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुनसरीका खुर्सिद अन्सारीलाई घटनाको तेस्रो दिनमै सहिद घोषणा गरेको छ। यति मात्रै होइन घटना भएको भोलिपल्ट एसएसपीको नेतृत्वमा छानविन समिति नै बनायो। तर, गरिब निमुखा कञ्चनपुरकी निर्मला हत्या घटनामा राज्य उदासिन बन्यो। सुरुमै छानविन गर्नु त कता हो कता आफ्ना मान्छे मुछिएपछि प्रमाण नष्ट गर्न तिर लाग्यो।
भारतीय प्रहरीको ‘मोस्ट वाण्टेड’ सूचीमा रहेका खुर्सिदको बिहीबार दिउँसो सुनसरीको भुटाहामा अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो। भुटाहामा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका नेकपाका कार्यकर्ता समेत रहेका खुर्सिदले आफ्नो विद्यालयको शिक्षक बनाएर भारतीय आतंकवादीलाई आश्रय दिँदै संरक्षण गर्दै आएका थिए।
पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका विवरणमा उनले थुप्रै भारतीय आतंकवादीलाई नेपाली नागरिकता समेत दिलाएका छन्। यसरी अपराधीको संरक्षण गरेपछि उनलाई भारतीय प्रहरीले नै योजनाबद्ध रुपमा सुट गरेको खबरहरु पनि आइरहेका छन्।
यस्तो बेला ओली सरकारले हतार हतार उनलाई सहिद घोषणा गरेर देशका लागि बलिदानी दिएका वास्तविक सहिदको अपमान गरेको छ। त्यतिमात्रै होइन खुर्सिदको परिवारलाई १० लाख पनि दिने निर्णय ओली सरकारले गरेको छ। तर, न्यायको भीख माग्दै निर्मलाका आमाबुवा काठमाडौंसम्म आउँदा पनि ओली सरकार अझै गम्भीर बनेको छैन्। अझै निर्मलाका हत्यारा पत्ता लागेका छैनन्।
यस्तो बेला ओली सरकारविरुद्ध आक्रोश सुरु भएको छ। खासगरी कञ्चनपुरका जनता सरकारको रवैयाप्रति आक्रोशित बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकदेखि नेता कार्यकर्ता र स्थानीयवासी सरकारले कञ्चनपुरलाई विभेद गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन्। उनीहरुले न्यायका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो भनी प्रश्न गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा समेत खुर्सिदलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको छ। १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अपराधी पता लगाउन नसकेका र निर्मलाका परिवारलाई न्याय दिन नसकेका दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले एक आतंकबादीलाई दुई दिन नबित्दै शहिद घोषणा र क्षतिपुर्ति दिएर न्याय गरेको भन्दै एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘निर्मलाका आमा बुवाले न त क्षतिपुर्ति पाए, न न्याय पाए न त केही नै, आखिर किन ? यदि खुर्सिदलाई शहिद घोषणा गर्न सकिन्छ र क्षतिपुर्ति दिन सकिन्छ भने निर्मलालाई किन होइन ? जबाफ छ कसैसंग ? देशकी छोरीलाई न्याय दिन नसक्ने र आतंकवादीलाई न्याय दिने सरकारको बारेमा अरु कसैलाई केही भन्नु छ ?’